हिमाल खबरपत्रिका | भ्रष्ट संस्कार
मेयरलाई महँगा गाडी’ (१२–१८ साउन) खोज रिपोर्टमा जनप्रतिनिधिको गाडी मोहबारे पढेर खिन्न भइयो । स्थानीय निकायमा झण्डै दुई दशकको रिक्ततापछि नयाँ संघीय संरचना अनुसार बनेका स्थानीय सरकारबाट नागरिकले विकास र परिवर्तनको धेरै अपेक्षा गरेका छन् । तर सर्वत्र उस्तै प्रकृतिका बेथितिका कारण समृद्धि र सुधारका कुरा सुदूर सपना बन्ने हुन् कि भन्ने देखिएको छ । किनभने जनप्रतिनिधिका प्राथमिकता आफ्नो क्षेत्रको समस्या हटाउन भन्दा व्यक्तिगत सुखसुविधामै केन्द्रित छ । भवितव्य पर्दा चाहिने दमकल र बिरामीको आपत्कालीन सेवाका लागि अत्यावश्यक एम्बुलेन्स किन्न बजेट अभावलाई कारण देखाउने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्नो लागि करोड माथिका गाडी खरीद गर्नु विडम्बना हो । यस्तो मनपरी बजेटको फुर्मासी मात्र होइन, नीतिगत अनियमितता नै हो । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि गाडी र तलब–सुविधा नलिने घोषणा गर्नेहरू समेत यस्तो विलासी मोहमा फस्नुले हाम्रो राजनीतिक संस्कार नै भ्रष्ट रहेको देखाउँछ । सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको पद सुविधाका लागि नभई सेवाका लागि हो भनेर हाम्रा जनप्रतिनिधिले कहिले बुझलान् ?
आहा ‘लोक–पर्यटन’ !
‘रैथाने कुराः लोक, लोकल र लोक–पर्यटन’ (१२–१८ साउन) मा लोक संस्कृति र त्यससँग जोडिएका शाब्दिक व्यवहारबारे केदार शर्माको परिचर्चा घतलाग्दो लाग्यो । लेखकले भने झैं आधुनिकताको चपेटामा परेर हाम्रा लोकगीत, लोकगाथा, लोक–परिकार हराउँदै जाँदा पाका पुस्तासँग सोधखोज र खोजबिन गरेर तिनलाई जीवन्त पार्न सकिने संभावना छँदैछ । नेपालीको ‘लोक’ र अंग्रेजीको ‘लोकल’ गाँसिएर बनेका कैयन् शब्द हाम्रो दैनिक जीवनमा घुलमिल भइसक्दा लेखकले नयाँ शब्द ‘लोक–पर्यटन’ ल्याएका छन् । विदेशी शब्दको ठाडो अनुवादबाट जोगिएर भावानुवाद गरेका शब्दले सही अर्थ मात्र दिंदैनन्, तिनले जनजीवनसँग भिजेर चिरायु पनि पाउँछन् । ग्रामीण घुमफिर गर्दै रैथाने खानेकुराको स्वादमा रमाउनेहरूले ‘लोक–पर्यटन’ लाई माया गर्ने पक्का छ ।
‘फोरजीले संस्था नै संकटमा’ (१२–१८ साउन) रिपोर्टमा उल्लिखित तथ्यले नेपाल टेलिकमले अहिले रहेको थ्रीजीलाई सस्तैमा स्तरोन्नति गरी फोरजी बनाउन सकिने विकल्प छाडेर रु.१५ अर्ब नोक्सान हुने गरी नयाँ खरीद गर्नुले उच्च सरकारी तहको नियतमा शंका उब्जाएको छ । नाफाको दर र आम्दानी घटेर ओरालो लागिरहेको कम्पनीले फोरजीका लागि अत्यधिक रकम खर्चिंदा र समयमा फोरजी विस्तार नगरेर संभावित आम्दानी गुमाउँदा अझै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा छाएको यो संकटको रोकथामका लागि बेलैमा कदम चालियोस् ।
दोलखा, हालः काठमाडौं
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा स्थापना गरिएका बुद्धका मूर्तिहरू तोडफोड गरिएको विषयमा लेखिएको ‘बुद्ध मूर्ति तोडफोड र सावधानी’ (१२–१८ साउन) मनासिब छ । बुद्ध स्वयं मूर्ति पूजाको विरोधी हुन् । यस कारण बौद्धहरूले यस विषयलाई महत्व दिएर प्रतिक्रिया जनाउनु आवश्यक छैन । बौद्ध धर्मको एउटा प्रमुख विशेषता नै क्षमा हो । यसैलाई अंगीकार गरौं ।
नयाँलाई मौका देऊ
‘खेलाडी छनोटको विवाद’ (१२–१८ साउन) रिपोर्टमा महिला भलिबलको प्रारम्भिक छनोटमा नपरेका खेलाडीहरूको गुनासो हेर्दा अचम्म लाग्यो । खेल क्षेत्र भनेको नयाँ र ऊर्जाशील खेलाडीले प्रतिभा र क्षमता प्रदर्शन गर्ने थलो हो । फर्ममा रहनुपर्ने भएकाले खेलाडीको उमेरलाई पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । बढ्दो उमेर अनुसार आफूलाई माझन नसक्ने खेलाडीको प्रदर्शन फितलो हुने भएकाले तिनको बिदाइ र नयाँको स्वागत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । पक्कै पनि पुराना खेलाडीले विगतमा देशका लागि गरेका प्रदर्शन र योगदानको कदर गर्दै सम्मानजनक बिदाइ गरिनुपर्छ । तर एउटै खेलाडी टीममा लगातार परिरहन संभव हुँदैन । यसैले महिला भलिबलका कप्तान, उपकप्तान लगायतले आफूहरू छनोटमा नपर्नुको पीडालाई थाती राखेर नयाँ पुस्तालाई ऊर्जा दिने साथ–सहयोग दिऊन् । छनोट समितिले टोलीमा अनुभवहीन खेलाडी समेटेको आरोपलाई मत्थर पार्ने गरी टीम चुस्त पारोस् ।